Imboni Yezentengiso Yezenhlalo ka-2012
IGO-Globe.com ithuthukise i-infographic, i- Imboni Yezokumaketha Komphakathi, Ekhetha idatha eyisihluthulelo kwi-Social Media Examiner's Umbiko we-2012 Social Media Marketing Industry. I-Infographic ihlanganisa ama-Social Media Trends wakamuva, izinselelo zemidiya yomphakathi, Isu labakhangisi bezokuxhumana nokuningi.
Ngokubona kwami, izinselelo eziphezulu zibonakala. Ngenkathi ubuchwepheshe bethu buqhubeka nokuthuthuka, izinkampani zisabhekene nobunzima bokusebenzisa ngokuphelele imithombo yezokuxhumana, bathole abathonya, balinganise ukubuya kotshalomali, bakhe ababukeli, futhi benze izindlela ezingadingi izinsiza eziningi. Iqiniso ukuthi izinzuzo zemithombo yezokuxhumana ziyamangalisa, kepha umzamo odingekayo wokuthola leyo miphumela uyaqhubeka nokubukelwa phansi yimboni eqhubeka nokuzithengisa futhi ibeke okulindelwe phezulu kakhulu.
Tags: infographicizinselelo zokuxhumanaI-Social Media Examinerimboni yezokuxhumanaimboni yezokuxhumana yezokuxhumanaumbiko wezokukhangisa wezokuxhumana
Ukumakethwa Komphakathi Kwezokuvakasha Nezihambi
Kungani Ukuba Nezindawo Ezingaphansi Kwamafomu kushayela Ukuguqulwa
I-Oct 15, i-2012 ku-2: i-56 PM
I-infographic enhle. Ukuthola izethameli zakho eziqondiwe kubaluleke kakhulu impela, imithombo yezokuxhumana akuyona inkinga yezinombolo ezingavuthiwe. Okubaluleke kakhulu ukuthola ukuxhumana kwangempela nezithameli zakho ezihlosiwe.
Nov 30, 2012 ngo-5: 48 AM
Hlala ugxila kumyalezo wakho kuzidingo zephrofayili yakho ekahle yeklayenti
noma ikhasimende futhi ungalokothi wesabe ukuhlukanisa labo abangenhloso nhlobo
usebenzisa izinsizakalo zakho. Kungenza izinombolo zibukeke zizinhle, kepha zingezika-
alikho inani ebhizinisini lakho. Eqinisweni, uma ukhokhela umkhawulokudonsa wakho webhulogi
nge-gigabyte noma ukhokha imali yokufunda ngomfundi ngamunye nge-imeyili yakho yezindaba
service, abazingeli be-freebie bachitha imali yakho nesikhathi sakho.
Ukuklama Iwebhusayithi eSingapore
Aug 21, 2013 ku-6: 05 AM
Siyabonga ngolwazi lwakho olubalulekile oluchazwe ngokucacile.